March | 2010 | Moep1's Blog
Saidin, Thahtay hydropower projects to supply more electricity to Rakhine State
(NAY PYI TAW, 18 March, 2010)
At Saidin hydropower project in Buthidaung Township in the state, the Prime Minister fulfilled the transport, education and health requirements of the locals.
Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min presentedareport, saying that efforts to harness the waterfall failed during the past successive eras because of certain reasons. U Aung Zaw Naing of Anagutswanah Co Ltd explained geological, weather and land survey.
The Prime Minister and party inspected the project from the observation deck.
KTA company compiled the final feasibility study report in 1956. But the project could not be implemented due to the existence of insurgents that made the area unsafe.
It has becomeamedium- size hydropower plant project only at the time of Tatmadaw government. It will generate an average of 220 million kilowatt hours of electricity annually.
The project will provide additional power to all the towns in Rakhine State in addition to supplying electricity to ten northern towns of the region.
Next, the Prime Minister inspected Thahtay Hydropower Project. The Minister for Electric Power No. 1 reported on the aim and location of the dam, construction of the main dam, diversion tunnel, spillway, intake structure and sluice gate, strength of the machinery, and workforce.
In response, the Prime Minister attended to the needs, and viewed the worksite.
The zone-type project is being implemented by damming the Thahtay Creek, about 12 miles northeast of Thandwe.
Witha2028 feet long and 298 feet high embankment, the dam has two diversion tunnels. On completion, the plant withageneration capacity of 111 megawatts will be able to produce 386 million kilowatt hoursayear.
So far, the project has been completed by 20.24 per cent. On completion, the project will be able to satisfy the electricity demand of the whole southern part of Rakhine State.
Comments Off on Saidin, Thahtay hydropower projects to supply more electricity to Rakhine State	| စိုင်တင် (Saitin), သူဌေး (Thahtay)	| Permalink
(NAY PYI TAW,9March , 2010)
Shweli (3) Dam project will be implemented in Momeik Township of Shan State (North). Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min, accompanied by Deputy Minister U Myo Myint and officials, on7March visited the project site to be implemented by the ministry.
On arrival at the briefing hall of the dam project, the minister heard reports submitted by officials of the project. Director U Nay Myo Win of No (2) Construction reported the minister on maintenance of Twinnge-Momeik road section, construction of approach road to the dam, road maintenance in Kyauktaung village, situations of briges on Mandalay Wapyutaung-Momeik road and the road linking Momeik and the dam, sites chosen for construction of hydropower plant project, implementation of hydropower projects on Shweli River, and facts about the dam project. Director (Geology) U Kyaw Nyein submitted report on geological situation of the project, feasibility tests and future plans. The deputy minister and director-general presented supplementary reports.
The minister gave necessary instructions. The minister inspected the dam project from the view deck on left bank of the dam project.
Comments Off on Shweli (3) Dam to be implemented in Shan State	| ရွှေလီ(၃) Shweli-3	| Permalink
Comments Off on ရွှေလီ(၃) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၀န်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| ရွှေလီ(၃) Shweli-3	| Permalink
ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှ
တာဘိုင် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် ဓာတ်အား စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ပြီ နိုင်ငံတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မောင်းနှင်အား အပေါ် မူတည်လျက် ရှိသည်။ မောင်းနှင်အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလုံလောက်လောက် ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သည်နှင့်အမျှ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများကစက်စွမ်းအားအပြည့်အဝ လည် ပတ်နိုင်ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နှင့် ဓာတ်ငွေ့အလုံအလောက်ရရှိအောင် ဆက်သွယ်ကြိုးပမ်း နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မြစ်ချောင်းရေ သယံဇာတ ပေါများသည့် အလျှောက် ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် ရေလှောင်တမံ ဘက်စုံ စီမံကိန်းကြီးများ တည်ဆောက်ကာ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက် အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိရာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် အသုံးပြုလျက် ရှိနေသည်။ အထူး စီမံကိန်းကြီးများ ချမှတ်ပြီးလည်း အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်လျက် ရှိသည်။
ယင်းတို့အထဲတွင် မန္တလေးမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် (၃၁)မိုင်ကွာ ရဲရွာရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီးလည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် မြစ်ငယ်မြစ်(ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်)အပေါ်တွင် တည်ဆောက်အကောင် အထည်ဖော်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အကြီးဆုံးရေလှောင်တမံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဤမျှကြီးမားသည်ကို ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရောက်ရှိ မြင်တွေ့ရမှသာ ကောင်းစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမှသွားလျှင် ပြင်ဦးလွင်လမ်း ကျောက်ချော အရောက်တွင် လမ်းညာဘက်၌ စီမံကိန်းဆိုင်းဘုတ်တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျောက်ချောရွာအတိုင်း မောင်းနှင်လာလျှင် ရွာမှလွန်သော် အုတ်ခင်းလမ်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းအတိုင်းလိုက်လာပါက ကျွဲနဖိုး တောင်များ ရှုခင်းအလှနှင့် ယှဉ်လျက် ကျောက်တောင်များကြားမှ လမ်းက ဖြူးဖြောင့်လျက်ရှိသည်။ ရဲရွာရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းစတင်မှ လမ်းတိုးတက် ကောင်းမွန်လာသည်။ လမ်းတစ်လျှောက် ဆီးခြံများလည်း တွေ့ရသလို ပဲမျိုးစုံယာခင်းများလည်း တွေ့ရသည်။
ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း မုခ်ဦးရောက်သောအခါ တောတောင်ရှုခင်းတွေက ဒုဋ္ဌဝတီ မြစ်ညာ၏အလှကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီး တစ်ခုလုံး အပေါ် လှည့်လည်လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ကျောက်တောင် ကျောက်သားလမ်းဖောက်လုပ် ထားပြီး လှပစွာကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည်။ တမံကြီးမှ အထက်ကြည့်လိုက်သော် ဒုဋ္ဌဝတီမြစ် ရေပြင်ကြီးသည် တောင်ထွတ်တောင်စွယ် တောင်များ အကြား၌ ပန်းချီရေးထိုးထားသလို လှပနေသည်။ တောတောင်၏ အစိမ်းရောင်၊ ရေ၏အစိမ်းရောင်တို့ဖြင့် ဆောင်းနှောင်းနွေ ရာသီသရုပ် ပေါ်လွင်လှသည်။ တောင်ကမ်းပါးယံ၌ ရဲရွာရေအားလျှစ်စစ် စီမံကိန်းဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ကိုလည်း လှမ်းမြင်ရသည်။ တောင်ကိုကွေ့ပတ်ဆင်းရင်း ပင်မတမံကြီး မည်မျှ မြင့်မားကြောင်း အံ့မခန်း တွေ့ရသည်။
လျှစ်စစ်ဓာတ်အားများထုတ်လုပ်ပေးသည့် ကြီးမားသော တာဘိုင်ကြီးများကိုလည်း တပ်ဆင် နေကြသည်။ ပင်မတမံတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရေပိုလွှဲတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရေယူအဆောက်အအုံလုပ်ငန်း၊ှတငအခ့ပမေိ လုပ်ငန်းနှင့် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲတွင် တာဘိုင်အမှတ် (၁)မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ရာ ဖေဖော် ဝါရီ (၂၁) ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်က ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းများကို လျာထားသတ်မှတ်ချိန် ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြားသည်။ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တာဘိုင် (၄)လုံးအနက် တစ်လုံးမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စမ်းသပ်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ လည်ပတ်၍ ထွက်ရှိသော ရေကို စက်ရုံရေထုတ်မြောင်းမှ တစ်ဆင့် ဒုဋ္ဌဝတီ မြစ်အတွင်းသို့ ထုတ်လွှတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသည် ရေယူအဆောက်အအုံလေးခု၊ ရေပိုလွှဲနှင့် တစ်လုံးလျှင် စက်တပ်ဆင် အင်အား (၁၉၇ ဒသမ ၅)မဂ္ဂါဝပ်ရှိသော တာဘိုင်နှင့် ဂျင်နရေတာ လေး လုံး တပ်ဆင်ထားသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုစုပေါင်း မဂ္ဂါဝပ် (၇၉ဝ)ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ တာဘိုင်အမှတ်(၁)မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေပြီး ထွက်ရှိလာသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို ဓာတ်အားဖြန့်ကွန်ရက်စနစ်သို့ ဖြည့်ဆည်း ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည် ဟုသိရသည်။
Comments Off on ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှ	| ရဲရွာ (့Yeywa), ဆောင်းပါး (Article)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for March, 2010.